Ungakuthuthukisa Kanjani Ukwethembeka Kwekhasimende Ngokumaketha Kwedijithali | Martech Zone
Awukwazi ukugcina ongakuqondi. Lapho kugxilwe ekutholakaleni kwamakhasimende njalo, kuba lula ukuhanjiswa. Kulungile, ngakho-ke uthole isu lokutholwa, wenze umkhiqizo / insizakalo yakho ilingane nezimpilo zamakhasimende. Isiphakamiso sakho senani eliyingqayizivele (UVP) siyasebenza - iyenga ukuguqulwa futhi iqondise izinqumo zokuthenga. Uyazi ukuthi kwenzekani ngemuva kwalokho? Ngabe umsebenzisi ungena kuphi ngemuva kokuqedwa komjikelezo wokuthengisa?
Qala ngokuqonda izithameli zakho
Yize kumnandi ukuthola iziteshi ezintsha nezethameli ezintsha ongazidayisela zona, kubiza kakhulu ukuyigcina. Kodwa-ke, ukugcinwa akuthembeli kubashayeli abafanayo njengokutholwa - izinhloso ezingemuva kwazo zehlukile, futhi noma ngabe isimilo nokuziphatha komsebenzisi okuvela kulaba bobabili kuyahambisana kufanele kubhekwane nakho ngokwehlukile. Ukwethembeka kwamakhasimende kwakhela ekugcineni. Ukutholwa kwamakhasimende kumane nje kuyisango lakho.
Okusemqoka ukuthatha lapha ukuqonda ukuthi amakhasimende akho awanyamalali ngemuva komjikelezo wokuthengisa kepha qhubeka nokuzibandakanya nomkhiqizo / nensizakalo yakho futhi ubophele ulwazi lwabo kulo nomkhiqizo wakho.
Ngakho-ke yini oyaziyo ngamakhasimende akho ngqo?
Ukuqedela isithombe sokuziphatha kwezilaleli zakho ngaphambi nangesikhathi somjikelezo wokuthengisa nokuhlanganisa okutholakele kucebo lakho lokugcina, uzodinga ukubeka idatha eningi. Yini i- Amamethrikhi Emininingwane Eyisisekelo ukucabangela? Ungaqala ngokuhlola okwakho:
Sesha Amamethrikhi Wokumaketha
Bakuthola kanjani abasebenzisi? Yimiphi imibuzo yosesho engenalo uphawu ekugcineni eholela ekuguqulweni noma endaweni yokuthenga? Yimaphi amakhasi wokufika enza kahle kakhulu futhi ubekuphi umsele i okuvuza kakhulu? Ngabe ungabopha ucezu oluthile lokuqukethwe kudemografi yomsebenzisi ethile ekulethele ivolumu enkulu yokuthengisa?
Uma unokulandelela kwe-Google Analytics inikwe amandla futhi yahlanganiswa ne-Google Search Console, Uzokwazi ukulandelela le mibuzo kuze kube yizinyanga eziyi-16 esikhathini esedlule futhi ukhombe ezenze kahle kakhulu. Ungaqhubeka nokujulisa ukuhlaziywa ngokubopha lawa magama angukhiye kumakhasi athile wokufika bese uwabona njengamaphoyinti amahle kakhulu ohambo lomsebenzisi oluya ekutholakaleni. Lokhu kungaphulwa nangaphezulu ngokuxhumanisa le datha ekubalweni kwabantu, uhlobo lwedivayisi, indlela oziphatha ngayo, kanye nezinto ozithandayo ukukhomba izinhlobo zezethameli ezingase ziguqulwe.
Kuqhuba kanjani ukuthengisa kwakho? Iyini inani le-oda elijwayelekile olibonayo? Lithini inani elijwayelekile lesilinganiso sakho sokuthenga esiphindayo? Yimiphi imikhiqizo / izinsizakalo zakho ezisebenza kahle kakhulu futhi ingabe kukhona ukuhlangana kwezibalo zabasebenzisi nezindlela zonyaka?
Uma une-Enhanced E-commerce yokusetha ukulandela ngomkhondo nge-Google Analytics noma enye ideshibhodi yesoftware evela eceleni yayo, uzokwazi ukulandelela konke lokhu futhi uqoqe ukuqonda okubalulekile. Into ebaluleke kakhulu okufanele uyikhumbule ukuthi amamethrikhi wokuthengisa ahluka kakhulu ngevolumu yesigaba esihlaziyiweyo. Ukuthengisa kwesizini noma okuthrendayo kungavela njengokungahleleki uma kubhekwa ngezikhawu zesikhathi esifushane ngakho-ke gcina amehlo akho evulekile futhi ulinganise idatha phakathi nesikhathi esibekiwe sesikhathi esandulelayo noma esikhathini esifanayo ngonyaka owandulele.
Iziteshi Zokutholwa Nezokudluliselwa
Uyazi ukuthi amakhasimende akho avela kuphi? Yiziphi iziteshi zakho ezinkulu zokuthola? Ingabe yimigudu efanayo abakuthola kuyo noma kumane kuyiziteshi eziqhuba ukuthengisa okuningi? Yiziphi iziteshi ezishayela imali engenayo kakhulu?
Uma sicabanga ukuthi iwebhusayithi yakho iyindawo yakho yokuqala yokuguqula nokuthi unokusetha kwe-Google Analytics, ungaphendula kalula le mibuzo engenhla. Vakashela Ukutholwa> Umbiko wokubuka konke ukubona ukuthi iziphi iziteshi ezihambisa ithrafikhi eningi futhi ezinokuncipha okuncane. Ungakhulisa ukuhlaziywa ngokuguqula ingxenye yezithameli ukusuka Bonke abasebenzisi kuya Iziguquli. Uma unezinhloso ezingaphezu kweyodwa noma ukusethwa kweqembu, ungaqhubeka ngokuhlukanisa ukusebenza kwesiteshi kunhloso ethile.
Ngayo yonke idatha engenhla idiliziwe futhi yakhelwe esimweni, manje usuyakwazi ukubona ngeso lengqondo uhlobo lwezethameli okungenzeka ukuthi luguqulwe, izindlela zabo zibheke emuva nangemva kwephoyinti lokuguqula nokuthi baziphatha kanjani ngaphambi, ngesikhathi nangemva kokwenza kwabo ukuthenga.
Ukusungula ikhasimende njengokubonakaliswa okuqanjiwe kwekhasimende lakho elihle kuzokusiza ukumaketha umkhiqizo wakho kangcono futhi uqonde ukuthi yini ebenze bakhetha wena njengomthengisi / umhlinzeki wabo. Lokhu kuchazwa kangcono lapho kuboniswa ngamehlo ngakho-ke ake senze isibonelo. Ithi uthengisa izincwadi zokupheka kanti inhloso yakho ukukhulisa inani lokuthengisa futhi uphromothe uchungechunge olusha lwe-Thanksgiving oluzayo kwisisekelo samakhasimende esisha nesivele sikhona. Yikuphi kwalokhu okulula kuwe ukumaketha?
“Sifisa ukukhuphula [lolu] chungechunge lwezincwadi zokupheka ngalolu hlelo Lokubonga ku-Instagram nakuPinterest. Inhloso yethu ngabesifazane, abaneminyaka engama-24-55 abathanda ukupheka futhi asebevele bathenga noma bacabanga ukuthenga incwadi yokupheka kulo nyaka ”
“Inhloso yethu ukwenyusa lolu chungechunge lwezincwadi zokupheka lubhekise kuMartha. Uhlala ekhaya umama oseminyakeni yama-40s othanda ukupheka. Uyathanda #foodporn amakhasi futhi wabelana ngezitsha zakhe ku-Instagram. Ungumuntu olondolozayo futhi uthokozela izindinganiso zendabuko ngakho-ke amaholide amakhulu ayinto enkulu kuye njengoba kuyisikhathi sonyaka kuphela lapho angaphekela wonke umndeni nabangane bawo. UMartha usethengile incwadi yokupheka kithi futhi ubheka okuphakelayo kwethu kwe-Instagram kanye newebhusayithi ukuthola izindlela zokupheka zomphakathi okungenani kanye ngenyanga. Ungene ekuphekeni okuphuzwayo nasekudleni okuphilayo. ”
Uyawubona umehluko? Lolu hlobo lwesethulo somuntu wamakhasimende yilokho ongakuthola kusuka kumamethrikhi anikezwe ngenhla abekwe esakhiweni.
Lolu hlobo lwezibalo zamakhasimende kunzima ukusetha futhi luhamba izingqimba ngokuxaka. Uma kuyinselelo enkulu kakhulu kuwe, kufanele nakanjani funa usizo kwi-ejensi yedijithali enolwazi kuma-analytics ezethameli eziphambili, ukwahlukaniswa, nokwenza ngcono umkhankaso.
Amaqhinga Wokukhangisa Okuvamile Amaningi kanye nama-KPI abo wokubheka
Manje njengoba usuwazi ama-personas wakho wekhasimende futhi uqonda nokuziphatha kwabo, izindlela ongasebenza ngazo ekugcineni kwazo zicaca kakhulu. Amaqhinga wokumaketha angagcinwa ngokuya nge-niche yakho, imakethe, amakhasimende, nezinhloso, kepha uhlaka oluyisisekelo lokuwachaza luhlala lukhona.
Amanye amaqhinga wokumaketha agcinwa eluhlaza futhi aqinisekiswe kaningi. Vele, uma kucatshangelwa ukuthi bacatshangelwa yimininingwane esungulwe esinyathelweni esedlule.
Injini Yokusesha (SEO)
Ngenkathi ibhekwa kakhulu njengecebo lokutholwa, i-SEO inikeza inani lamathuba okuthuthukisa ukugcinwa kwamakhasimende nokwakha ukwethembeka.
Lokhu kwenziwa ikakhulukazi ngokwenza okuqukethwe - kokubili kusayithi naku-offsite. Ngokukhomba amagama angukhiye, okuqukethwe kanye nemithombo yokudlulisa amakhasimende akho asebenzisana nayo futhi ahlanganyele nayo, uthola isinyathelo esiseduze nokwenza okuqukethwe kube ngokwakho ukuze uthwebule futhi ubabambe. Sebenzisa amamethrikhi wokukhangisa wokusesha kucebo lakho lokumaketha lokugcinwa kwe-SEO bese udala umgwaqo wokuqukethwe.
Ungagxili nje kumagama angukhiye amafushane omsila kepha zama ukukhuphula ukuhlobana kwezihloko ezihlobene. Ungakufezekisa lokhu nge ukuhlola amagama angukhiye e-LSI nama-syntagms wamagama asemqoka aqondise intshisekelo nenhloso yabasebenzisi. Masibuyele kuMartha nonyuselo lwencwadi yokupheka. Izihloko ezingagcina ziholele uMartha ekuthengeni enye incwadi yokupheka kuwe izindlela zokupheka ezihamba kancane, i-pantry, namabhodwe asetshenziselwe ukuzenza, ukukhetha izithako ezihlungwa yisizini noma indlela ezikhuliswa futhi zahlanganiswa ngayo. UMartha angahola ekuthengeni incwadi yokupheka uma ezibiza njengomgogodla womndeni futhi ebona ukuthi itafula lesidlo sakusihlwa liyiphuzu lokuqoqa, izindinganiso zomphakathi nezomndeni. Ungamane uphoqelele umsebenzisi ukuthi azikhombe njengengxenye yengxenye enkulu, kepha zama ukwenza ngezifiso ulwazi lwabo.
Ezinye izici zobuchwepheshe ze-SEO, ikakhulukazi maqondana nokwenza kusayithi okufana newebhusayithi eqinile nokwakhiwa kolwazi nge-HTML5 evumelekile nemakhaphu eyakhiwe ye-microdata siza abakhasi ukuba baqonde kangcono isakhiwo nama-semantics asemuva kwaso. Lokhu kusiza ukutholakala nokwenza ubuwena bamakhasi emiphumela yosesho ngokuya ngokuthandwa ngumsebenzisi. Isibonelo, ukwakheka kwewebhu nokwakhiwa kwe-semantic kuzosiza ukukhombisa imiphumela ehlukile kubantu abahlukile kanjena:
Lapho uMartha efuna incwadi yokupheka ngenjini yokusesha, cishe uzothola izincwadi zokupheka zokupheka ezihamba kancane njengemiphumela ebuyisiwe.
Lapho ngifuna ibhuku lokupheka ngenjini yokusesha, ngingahle ngithole i-Anarchist Cookbook njengomphumela obuyisiwe.
Ezinye izinto zobuchwepheshe ezihlobene nokusetshenziswa nokusebenza kwewebhusayithi njengesikhathi sokulayisha ikhasi, ukuphendula kanye nokutholakala yizici ezibalulekile ze-SEO ezisekela ukugcinwa komsebenzisi nokusiza ekwakheni ukwethembeka. Uma iwebhusayithi yakho ingafinyeleleki noma kunzima ukuyilayisha, abasebenzisi bazokwazi ukubhampa noma bangahlangani kakhulu nayo.
Ama-KPI anconywe ukulandela ngomkhondo:
Inombolo izixhumanisi ezingenayo
Inombolo izixhumanisi eziphumayo
Umthamo we i-organic traffic
Umthamo we ukudluliselwa kwezimoto
Ikhasi lomphumela wenjini yokusesha (SERP) yesethi ethile yamagama angukhiye
Ukubukwa kwekhasi iseshini ngayinye
Hlala isikhathi (isikhathi esimaphakathi ekhasini)
Imithombo yezokuxhumana iyisiteshi esihle sokwakha ukuqwashisa, ukwethembana nokwethembeka. Izwakala kakhulu ngokuhambisana namaqhinga wokugcina we-SEO / SEM. Kwenziwe isipele ngokukhangisa okunomthelela kumnyango wakho wokwakha abameli bomkhiqizo ukuqinisa ukugcinwa nokudluliselwa kwekhwalithi ephezulu.
Lapho kuvunyelaniswa nekhalenda lakho lokuhlela / lokushicilela elisungulwe ngezinjongo zokumaketha kwe-SEO futhi lihlanganiswe nama-hashtag anamagama nokulandelela isixhumanisi kuba yisiteshi esinamandla sokwakha ukwethembeka kwamakhasimende.
Ungasebenzisa ama-hashtag anophawu nokulandela ngomkhondo isixhumanisi ukukhomba nokuhlola amathuba amasha wokuzibandakanya bese uthepha umthombo wabangaba ngabameli bomkhiqizo. Mhlawumbe inzuzo enkulu kunazo zonke yemidiya yezenhlalo yithuba lokuzibandakanya nesisekelo samakhasimende akho akhona futhi akhona ngesikhathi sangempela. Kusetshenziswa izingxoxo zokuxoxa nokufundisa abasebenzi bakho bokuthengisa ukuthi basebenzise imithombo yezokuxhumana njengengxenye yesevisi yakho yamakhasimende iqhinga elilodwa elinganakwa kakhulu elenza izimangaliso zokwakha ukugcinwa nokwethembeka kwamakhasimende.
Inombolo abalandeli nabalandeli
ukuzibophezela isilinganiso - womkhankaso kanye nekhasi elithile
Amaphesenti we ukudluliselwa kwezimoto ekhiqizwa ngokusebenzisa iziteshi zokuxhumana
The ivolumu yokuqukethwe Iqhubekele phambili njengengxenye yokwabiwa kokumaketha
Inombolo kuqedelwe izicelo zenkonzo yamakhasimende ngengxoxo yezokuxhumana, ukuphawula nokuthumela imiyalezo
I-imeyili ayisoze yafa futhi ingumthombo oyisisekelo wayo yonke imisebenzi yewebhu nokusetshenziswa kwayo.
Ukumaketha nge-imeyili kusetshenziswa kakhulu njengomshayeli oyinhloko wokugcinwa komsebenzisi naku kulungele imikhondo ebandayo. Amaqhinga amabili ajwayelekile asetshenziswa ngokumaketha nge-imeyili ukuthuthukisa ukugcinwa kwamakhasimende ukuthumela izincwadi zezindaba ngezindaba zakamuva nezibuyekezo zokuqukethwe nokuyenga ukuthenga okuphindaphindwayo ngokunikeza izaphulelo namadili kumakhasimende akhona.
Ukulungiswa kokuqukethwe kwanoma iyiphi yalezi zindlela kungavumelaniswa nekhalenda lakho lokuhlela ukuze unikeze imiphumela emihle ngokuya ngesilinganiso esivulekile ne-CTR. Ungaqhubeka nokuhlukanisa imizamo yakho ekuhlukaniseni uhlu lwama-imeyili ngokuya ngokuthandwa ngumsebenzisi, izitayela zesizini, kanye nedemokhrasi.
Kodwa ukumaketha nge-imeyili kufanele kuhanjiswane nakho ngokuqapha okukhulu ukwedlula noma yikuphi okungenhla. Ukweqisa ngokweqile nokusingatha kabi kungathola ukuthi isizinda sakho sonke sivalwe ohlwini futhi kulimaze kakhulu ukwethembana okwakhiwe kuze kube manje. Into ebaluleke kakhulu okumele uyiqaphele lapha ukuthi umsebenzisi wakho uyazi ukuthi ufike kanjani ohlwini lwakho lwamakheli, uzolusingatha kanjani nokuthi unikezwa ithuba lokulungisa lokho akuthandayo noma ukuzikhipha ohlwini nganoma yisiphi isikhathi.
Lapho uthatha isinqumo sokuthi uzosebenzisa i-mail server yakho noma isevisi yomuntu wesithathu ngayo, sicela ubheke ukuthi uyakwazi yini ukulandela yonke imithetho ebhalwe ngenhla futhi unamandla okukala nokulandela ukusebenza kwawo.
Inombolo ama-imeyili athunyelwe ukuphuma - umkhankaso othile futhi jikelele
Chofoza ngezinga (CTR) ye-imeyili
Isilinganiso esivulekile womkhankaso we-imeyili uthunyelwe
Phinda isilinganiso sokuthenga ngesiteshi se-imeyili
Gada, Linganisa futhi Lungiselela Ukukhula
Njengoba kushiwo ngenhla, ukuze uthuthukise ukwethembeka kwamakhasimende akho ngokumaketha kwedijithali, udinga ukuqonda amakhasimende akho. Kunezinhlaka eziningi zokuhlaziywa kwamakhasimende okufanele zihlolwe futhi zihambisane nemizamo yakho yokumaketha. Ukwenza isu lokumaketha lokugcinwa kwamakhasimende kungahluka kusuka kumabhizinisi kuye kumikhiqizo kodwa izinqubo zezinhloso ezikhona ziyalingana.
Ukulinganisa okujulile nokuhlaziya okuthuthukisiwe kwengxenye ngayinye yohambo lwakho lwamakhasimende kuyisiqalo esihle kepha kuzokunikeza ithani lemininingwane engahlelekile. Indlela oyisebenzisa ngayo le datha ukubuza futhi unikeze impendulo emibuzweni ethile mayelana nokuziphatha kwabo ngale kokuqedwa komjikelezo wokuthengisa izonquma impumelelo yakho ekwakheni ubudlelwane besikhathi eside namakhasimende akho.
Futhi ekugcinweni kuphakama ukwethembeka nokwethembana.
Tags: iziteshi zokutholwaizinga lokunciphisaisilinganiso sokuchofozaisilinganiso sokuchofozaimininingwane yamakhasimendeInsizakalo yekhasimendeisicelo samakhasimendeukudayiswa kwe-digitalisikhathi sokuhlalaamamethrikhi wokuthengisa we-imeyiliizinga lokuzibandakanyafansabalandeliI-google analyticsizixhumanisi ezingenayoizinkomba zokusebenza kokhiyeKPIamamethrikhi wokumakethaisilinganiso esivulekilei-organic trafficizixhumanisi eziphumayoukubukwa kwekhasiukubukwa kwekhasi ngeseshini ngayinyeabantuukudluliselwa kwezimotophinda isilinganiso sokuthengaiziteshi zokugcinaamamethrikhi wokugcinaamamethrikhi wokuthengisaikhasi lomphumela wenjini yokuseshasesha amamethrikhi wokumakethainyokametric media social